Jarida Laser ee Qalabka Kuleylka iyo Qalabka Ilaalinta - Laser Dahab ah
Jarida Laser ee Qalabka Nalalka iyo Qalabka Difaaca
Jarida laserayaa si tartiib tartiib ah u beddeleysa jarista mindi dhaqameedka. Si ka duwan inta badan qalabka aan birta ahayn,qalabka ningaxwaxay ubaahan yihiin shaqeyn wanaagsan iyo adkeysi. Si loola kulmo wax ku oolnimada kuleylka, awoodda sare, miisaanka yar iyo hoos u dhaca kuleylka xad dhaafka ah, isku dhafka maaddada kuleylka ayaa aad u adag, ama si gaar ah loo sharraxo - way adag tahay in la gooyo. Kooxdayada cilmi baarista iyo teknolojiyada ayaa ikhtiraacay mid gaar ahMashiinka goynta laser oo leh awood ku filan astaamahaas.
Ka faa'iidaysiga mashiinka goynta lasersoo saaray by goldlaser, waxaa suurtagal ah in si hufan looga soo saaro alaabada inta badan dhammaan dharka farsamada iyo walxaha isku dhafan ee kuleylka iyo warshadaha ilaalinta, iyadoo aan loo eegin sida ay u adag tahay qaabka, ama sida ay u yar tahay ama u weyn tahay wax soo saarka. Marka la jarayo, habka goynta leysku wuxuu shaabadeeyaa dhammaan cidhifyada qalabka macmalka ah ee u nugul inay xirmaan oo kala baxaan. Nidaamkani, markiisa, wuxuu ka hortagayaa jahwareerka mustaqbalka, hubinta kalsoonida sheyga sii jiri doona.
Qalabka kuleylka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa codsiyada kala duwan:
Gaaska iyo marawaxadaha uumiga,
Qalabka hawada sare,
Nidaamyada qiiqa, iwm.
Qalabka Kuleylka ugu Weyn ee Goynta Laser
Fiberglass, dhogorta macdanta, cellulose, fiilooyinka dabiiciga ah, polystyrene, polyisocyanurate, polyurethane, Vermiculite iyo perlite, urea-formaldehyde xumbo, xumbo sibidh, phenolic xumbo, ningax Facings, iwm
Faa'iidooyinka Goynta Laser
Saxsanaanta sare iyo heerarka dulqaadka wanaagsan
Abuuritaanka joomatari aad u adag
Geesaha jilicsan iyo dhammeystirka nadiifinta
Kaydinta kharashka - Ma jiro daboolyo guntin oo xirmaya
Dib-u-soo-celin degdeg ah - Si dhakhso leh ayuu u sameeyaa qaybo qaab-caado u leh oo tirtiraya sugitaanka qalabka
Ma jiro qalab xirxiran - Nidaamka jarista Laser si fudud ayaa loogu celin karaa iyadoo si siman loo sarreeyaa
Talo soo jeedinta Mashiinka
Waxaan kugula talineynaa mashiinka leysarka soo socda ee goynta qalabka dahaarka iyo qalabka difaaca
CO2 Flatbed Laser magaabay
• Gear iyo Rack Driven
• Xawaare sare, saxnaan sare
• Qalabka xammuulka
• Meelo shaqo oo kala duwan ikhtiyaari ah
Wax badan oo ku saabsan sheyga
CO₂ muraayadda Laser / CO₂ RF Laser
Length 2000mm ~ 13000mm, Ballaaran 1600mm ~ 3200mm
Dharka farsamada, dharka warshadaha, iwm.
U fiirso mashiinka goynta leysarka qalabka dahaarka ficil ahaan!
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaala talino adiga xal goynta laserqalabka dahaarka, qalabka ilaalinta iyo xitaa warshadaha dalabkaaga gaarka ah. Si aad u hesho macluumaad dheeri ah (warbixinta tijaabada tusaalaha, khariidada macaamiisha qeybinta, codsi demo…),hadda nala soo xiriir!